Tsy Nahaliana ny Maro tao Maraoka ny Kabarin’ny Mpanjaka Nandritra ny Fetin’ny Seza Fiandrianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Septambra 2017 4:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, Italiano, عربي, Ελληνικά, English
Sary nifampizarana ahitana ny fihetsiketseham-panoherana tao amin'ny faritra Rif ao Maraoka tamin'ny 14 aogositra 2017. Loharano: Youssef Ouled ao amin'ny Twitter.
Ny 29 jolay 2017 no tsingerintaona manamarika ny faha-18 taona niakaran'ny mpanjaka maraokana Mohammed VI teo amin'ny seza fiandrianana rehefa niamboho ny rainy Hassan II. Fantatra amin'ny anarana hoe “Fetin'ny Seza Fiandrianana” (عيد العرش) io andro io ary miaraka amin'ny fanaovana kabary.
Tamin'ity taona ity, anefa, dia tontosaina ao anatin'ny fotoanan'ny korotandrotana ny kabary. Tao anatin'ny volana maromaro izay ny faritra avaratra ao Rif no nisy fihetsiketseham-panoherana taorian'ny fahafatesan'i Mohcine Fikri, mpanjono iray nohitsakitsahana tao anaty kamiao rehefa noraofin'ny polisy ny trondrony. Nahazo vahana avy eo ilay hetsika ary lasa fantatra amin'ny anarana arabo hoe “Hirak”, izay midika hoe “hetsika”.
Ankilan'ireo ao an-tanindrazana, dia efa nanao fihetsiketseham-panoherana ny famoretana ataon'ny polisy sy ny fanjakana ao Rif ny Maraokana am-pielezana manerana izao tontolo izao, mitaky ny hamotsorana ny gadra politika.
Izay no nahatonga ireo mpanao gazety sy mpikatroka maraokana te-hahafantatra ihany izay setriny ho ataon'ny mpanjaka amin'izany fihetsiketsehana izany mandritra ny kabariny amin'ny Fetin'ny Seza Fiandrianana. Herinandro vitsivitsy monja mialoha ity kabary ity, mpanao fihetsiketsehana mihoatra ny 100 mitaky asa sy famaranana ny kolikoly no nosamborin'ny polisy, ary tafiditra ao anatin'izany nosamborina izany ilay olo-malazan'ny fihetsiketsehana antsoina hoe Nasser Zefzafi.
Nandritra ny kabariny ny mpanjaka nanolotra ny famindrampon'ny mpanjaka tamin'ny gadra politika vitsivitsy manam-pifandraisana amin'ny Hirak. Raha notaterina betsaka tao amin'ny fampitam-baovao maraokana izany, dia nisy Riffeana mpikatroka iray manaraka akaiky ny hetsika, antsoina hoe Btissam Akarkach nilaza tamin'ny Global Voices fa tsara ny mampahatsiahy “fa olona 11 monja avy amin'ny tanànan'i Al Hoceima [tanàna lehibe ao amin'ny faritr'i Rif] no navotsotra, iray avy ao Casablanca [Tanàna lehibe indrindra ao Maraoka] ary dimy avy ao Nador [tanandehibe iray hafa ao amin'ny faritr'i Rif].”
Raha nitatitra ny seha-baovao maraokana fa “Namindran'ny mpanjaka fo nandritra ny fetin'ny seza fiandrianana ny olom-boaheloka miisa 1.178″, fehezanteny nalaina avy amin'ny tranonkalan'ny governemanta mihitsy, nasongadin'ny Reuters anefa fa ambany lavitra amin'izany ny isa marina.
‘Tsipahin'ny mpanjaka ny andraikiny…maha-mpandray anjara politika voalohany azy’
Nanontany ny mpanjaka nandritra ny kabariny, “Inona moa ny dikan'ny andraikitra raha tsy mahita imaso ny iray amin'ny zavatra fototra takiana amin'izany andraikitra izany ny manampahefana mahefa ho amin'izany, dia ny mihaino ny ahiahin'ny olom-pirenena?”
Noheverin'ny maro ho tsy mahataitra ny kabary.
Ny mpanjaka rahateo no manana ny fahefana lehibe indrindra ao Maraoka. Izy no lehiben'ny fanjakana ary izy no lehiben'ny tafika. Miasa aminy daholo ny polisy rehetra, ny minisitra rehetra ary ny ben'ny tanàna rehetra, ary ny fianakavian'ny mpanjaka no manana ny asam-pihariana matanjaka maro amin'ireo sehatr'asa maro ao Maraoka. Maro ny mihevitra fa afa-manao zavatra bebe kokoa izy iadiana amin'ny kolikoly ao amin'ny firenena.
Nilaza tamin'ny Global Voices i Amina A, mpianatra iray ao amin'ny fifandraisana iraisampirenena ao Casablanca, fa tsy misy ny kisendrasendra :
Izany ny kabary ofisialy. Tsipahin'ny tokana mpitam-pahefana ny anjara andraikiny amin'ny maha-loham-panjakana sy amin'ny maha-mpandray anjara politika voalohany azy. Takatsika avy amin'izany fa milaza mazava ny fanjakana hoe resy isika amin'ny lalao, tsy manam-bahaolana isika, ary dia mihitsoka ao ianareo.
Maro amin'ireo Maraokana mpikatroka no naneho hevitra tao amin'ny media sosialy fa fihetsika fahaizana miala bala ataon'ny mpanjaka amin'ny olana mianjady amin'ny firenena izany, ary manaiky izany i Amina :
Amin'ny ankapobeny izy miteny hoe ‘Tsy izaho no tompon'andraikitra amin'ny fahasarotana ampolo taonany mahazo an'i Maraoka. Tahaka anareo ihany koa aho tsy maharaka ny halakin'ny fandehan-draharaha. Mijery sy manameloka izany eo ankilanareo aho, manodidina antsika ny kolikoly.’
Raha niresaka tamin'ny Global Voices mitaky ny tsy anononana ny anarany, dia mandresy lahatra ny mpanao gazety iray fa ao anatin'ny fanehoana sary amin'ny fampitam-baovao arahin'ny mpanjaka maso akaiky dia akaiky izany :
Miahy fatratra amin'ny endrika ahitana azy ny mpanjaka. Tsy misy mandeha amin'ny kisendrasendra izany, efa voarefy daholo ny zava-drehetra. Indreo ny sary eny an-dalana hanehoana amin'ny vahoaka fa mpanjaka mahafinaritra izy, tsy mpanao didijadona tahaka ireo mpitarika hafa, amin'ny fahitalavitra tiany ny Maraokana hatoky amin'ny voninahitra tsy ofisialy ho Mpanjakan'ny mahantra.
Rehefa nandimby ny fahefan'ny rainy izay zary mampiady hevitra ny Mpanjaka Mohammed VI, dia notaterina fa te-ho tokana mpitam-pahefana hafa mihitsy izy. Tsindraindray hita any amin'ny fampitam-baovao ny selfie iarahany amin'ny olona eny an-dalana ary hita amin'ny fahitalavi-panjakana matetika izy manao asam-piantrana ao anaty fitafiana nentin-drazana maraokana.
Raha nahatratra ny ampahany betsaka tamin'ny tontolo arabo ny lohataona arabo taona 2011, dia nanambara ny Mpanjaka Mohammed VI, ho setrin'ny fitakian'ny hetsika 20 febroary ao amin'ny firenena fa hisy ny komity (tendren'ny mpanjaka) hiantsoroka ny fanovana ny lalampanorenana. Raha jeren'ny maro ho fanatsarana endrika izany, dia nentina hanavahana ny tenany amin'ireo mpanao didijadona arabo maherisetra hafa tahaka an'i Mubarak tao Ejipta, i Gaddhafi tao Lybia ary i Assad ao Syria.
Na teo aza izany, fotoana fohy taorian'ny namotsorana an'i Salima Ziani, mpanao fihetsiketsehana malaza fantatra amin'ny anarana tsotra hoe “Silya”, avy tao am-ponja efa ho roa volana tao amin'ny Fonjan'i Oukacha tao Casablanca, dia nampidirina hopitaly noho ny tsy fahampian-tsakoafo sy ny rarintsaina niaretany nandritr any fotoana nitazonana azy.
Izany no zavamisy iainan'ny mpanao fihetsiketsehana ao Maraoka amin'izao fotoana, araka ny nasongadin'i Btissam Akarkach. “Tamin'ireo nahazo famindram-po tany amin'ny mpanjaka, dia 11 ihany hatramin'izao no navotsotra. Nieritreritra ny olona fa anjatony no noafahana saintsy tsy misy marina ny amin'izany.”
Nisy dikany tanteraka izany fandresen-dahatra izany tamin'ny 20 jolay, raha nidina an-dalambe ny olona an'arivony tao Al Hoceima ary nanaraka izany ny famoretana maherisetra nataon'ny polisy, naratra mafy tamin'izany i Imad Attabi, mpanao fihetsiketsehana iray 25 taona ary maty vokatry ny ratra nahazo azy tapabolana taty aoriana, taoriana kelin'ny kabarin'ny mpanjaka.